Berry-kolontsaina | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Honeysuckle ambiny: mianatra ny tsiambaratelon'ny fambolena
Tsaroantsika daholo ny tantaran'ny "apples" tanora, saingy vitsy no mahafantatra fa manana ny "elixir of youth" ny natiora. Tazo kely tsy dia mahazatra izany, ary antsoina hoe honeysuckle izany. Aiza no misy io fampitahana io? Ny fihinanana hendrasendra dia manana karazan-javatra mahasoa mahavelona. Ao amin'io berera io dia misy singa tsy fahita firy - selenium, izay manome ny tanora amin'ny sela ao amin'ny vatana.
Ny fampiasana honeysuckle, tombontsoa sy fahasimbana amin'ny vatan'olombelona
Honeysuckle - zavamaniry miteraka, voankazo marevaka matevina. Amin'izao fotoana izao, dia misy karazany miisa 190 eo ho eo. Ny ankamaroan'izy ireo dia avy amin'ny firenena Aziatika. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny honeysuckle ho zava-mahadomelina ary hamantatra ny toetra mahasoa rehetra sy ny fikajiana an'ity zavamaniry ity.
Blackest bibikely: fisorohana sy fanaraha-maso
Mihamaro tokoa, manomboka mitombo ny mainty hoditra ireo tompon-trano sy trano fonenana. Io karazana hazo madinidinika io dia manome be dia be matavy sy matavy. Ny voankazo dia ahitana zavatra mahasoa maro. Ny fitomboan'ny akorandriaka dia fotoan-tsarotra tsy mora sasatra. Ny zavamaniry iray feno hafanana tsy mitsahatra dia mangatsiaka, mangirifiry amin'ny aretina maro, ary manimba ny fikarakarana ny zavamaniry ny bibikely maro.
Blackberry Thornfrey: tombontsoa, ​​disadisa, fitafy ary fikarakarana
Ny blackberry dia ampahany amin'ny fianakaviana Rubus ao amin'ny fianakaviana Pink. Berry miaraka amin'ny saina dia mitovy amin'ny fombafomba manasitrana. Any Eoropa, tsy maniry ny jabora, fa any Amerika dia iray amin'ireo voankazo mahasalama indrindra. Ny Blackberries avy any Meksika dia teratany, ary ny vokatra manontolo dia entina any Etazonia sy Eoropa. Ao amin'ny firenentsika, maniry any anaty ala ny kirihitra maniry, saingy noho ny fanasitranany sy ny hakantony, ny alikaola dia mahazo ny lazany any an-tanimboly.
Tandindomin-doza amin'ny alikaola: fampiasana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny fanoherana
Sotro be sy mamy no avy any Amerika ary niely tany amin'ny firenena maro eran-tany. Nandritra ny dingan'ny famaranana dia nahavita nifanaraka tamin'ny fepetra takatry ny toetrandro izy, ary ankehitriny dia ampiasaina any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ny fampiasana dia tsy voafetra ho fihinanana fotsiny. Blackberry dia manana fiantraikany ara-pahasalamana eo amin'ny vatana.
Ny karazana malaza indrindra amin'ny mainty hoditra
Ireo izay efa nijaly talohan'ny ra tamin'ny fotoana fanadiovana ny mainty hoditra, dia ho faly hamboly ao amin'ny zaridainany ity zavamaniry ity avy amin'ny fianakaviana mavokely, tsy misy tsilo mpamboly. Ny karazan-tsakay tsy misy ifandraisany dia hamela anao hijinja vokatra tsara nefa tsy handany ezaka be amin'ny fanadiovana na ny fikarakarana ny orinasa iray tsy mendrika.
Fitsipika momba ny fambolena sy fiahiana ny blackberry "Giant"
Ny mainty hoditra dia karazam-borona isan-karazany avy amin'ny fianakaviana Rosaceae, izay mitombo any amin'ny faritra avaratra sy manerana an'i Eorazia, any anaty ala mikitroka, renirano tondra-drano ary, raha ny marina, ao an-jaridaina sy ao an-jaridaina. Fantatrao ve? Ny Blackberry dia tsy hatsaran-tarehy ivelany ihany, fa mandray soa avy amin'ny vatana. Ny jiro Blackberry dia manampy amin'ny fampihenana ny mari-pana, ny bioflavonoid ao anatin'izany dia mahazatra ny mari-pànan'ny vatana.
Fomba fanangonana alikaola ho an'ny ririnina
Kornelio dia hazo madinika na hazo fohy, nifindra monina avy any Caucase ary dia miorim-paka ao amin'ny tanin'i Ukraine, Moldavia sy Rosia. Ny dikanteny Dogwood avy amin'ny Turkic dia midika hoe "mena". Ny voankazo mena midorehitra dia ahitana be loatra ny anthocyanine, vitamin C ary ny pactine. Ny tombony azo avy amin'ny tsaramaso voankazo Cornel dia trano fivarotan-tsakafo sy vitamina.
Strawberry Victoria: torohevitra tsara indrindra momba ny fambolena sy fiahiana
Hilaza aminareo momba ny tsiambaratelon'ny fambolena sy fikarakarana ny trondro "Victoria." Rehefa avy nianatra azy ireo ianao, dia ho lasa mpamboly mahay. Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny "Victoria", ny trondron-dranomaso sy ny trondro "Victoria" - dia ny iray amin'ireo karazan-tsakay. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny akoho sy ny henan-drongony dia ny fitomboan'ny voankazo any an-tsaha, ary ny hazo maniry ao anaty ala.
Ny karazana alika malaza indrindra
Amin'ny ankapobeny, ny karazana alikaola dia manana fanoherana tena tsara ho an'ny hafanam-bozaka sy ny rivotra ary tsy mahavaha ny toetry ny tany, izay mety ho vato, vato kalsioma, maina, sns. Dense, tena sampana fambolena rafitra, mahatratra metatra metatra, mamela ny diky hazo hahazoana fahavoazana .
Mifidy ny karazana varimbazaha tsara indrindra amin'ny ririnina
Ny karazam-bozaka mafana amin'ny ririnina dia tena malaza amin'ny fambolena any an-trano noho ny tsirony, ny toetra mahasoa, ny fanamorana ny hafanana, ny aretina ary ny bibikely. Misy karazany maromaro toy izany. Mampahatsiahy antsika ireo karazam-bozaka maizim-bozaka malaza indrindra. Agave Ity karazana volombava maitso maherin'ny zato taona lasa izay dia nentina tany Amerika.
Blackberry Black Satin: tombony sy tsy fahampian-tsakafo, fitafy ary fikarakarana
Ny mainty hoditra dia an'ny Rubus genus ary mpikambana ao amin'ny fianakaviana mavokely. Ny zavamaniry dia maniry any amin'ny tendrony avaratra sy manjavozavo, any anaty ala mikoriana sy ala. Matetika ny kirihitra dia mitombo ao amin'ny lemaka amoron-dranomasina, faritra misy ala. Manomboka amin'ny tapaky ny volana Jona ny zavamaniry ary mifarana amin'ny volana aogositra. Ao amin'ny kirihitra iray dia ahitanao voninkazo, voankazo masaka sy maitso.
Fisorohana, fitaovana ary fomba famokarana menaka fihinanam-bilona
Ny ronono - ny kolontsaina malaza indrindra amin'ny zaridaina maro. Ny voankazo masira dia ankasitrahana tsy ho an'ny fanandramana mahafinaritra, fa koa malaza amin'ny toetra mahasoa ataon'izy ireo. Ny vokatry ny zavamaniry dia misy fiantraikany manohitra ny fiarovan-tratra, manintona, manatsara ny feon'ny vatany ary manome hery, manampy amin'ny ady. Na izany aza, raha te hahomby ianao, dia mila mahafantatra tsara ny fomba hanohitra ny bibikely maingoka.
Ny mpahay siansa dia namoaka karazana kakazo, ka ny iray dia ny varotra Chester Thornless tsy misy atiny. Mijoro eo anelanelan'ny hafa miaraka amin'ny fanoherana avo lenta mahavariana, ary koa fanandramana tsara. Blackberry Chester Thornless dia nanjary tia ny zaridaina noho ny tsy fisian'ny tsilo sy beza be.
Famaritana ny karazana yoshta sasany
Tsy ny zaridaina rehetra no mahalala ny anarana hoe "yoshta". Vao haingana, tia kokoa ny zaridaina eny an-jaridaina eny an-tseranam-piainana isika dia liana amin'io akorandriaka io, na dia naverina tamin'ny taona 80 aza ny hybrid. Mahasarika izany satria mety hamboly mandritra ny fotoana lava ny voany - mihinana ny tsilo.
Fambolena blueberries: fambolena sy fiahiana
Ny Blaogerôka dia efa fantatra ela teo amin'ny faritra misy antsika, saingy tsy ny olon-drehetra no mety hamboly azy io. Ny mpikaroka sasany dia mino fa ny olana amin'ny zavamaniry dia mihoatra noho ny vokatra aterak'izany. Ny hafa tsy mahalala ny fomba hitomboany. Manantena isika fa ity fitaovana ity dia hanampy ny tsirairay hanomana tsara ny zavamaniry. Blueberry: ny famaritana ny zavamaniry Blueberry dia fako iray izay mamaritra ny karazana biolojista amin'ny maha-voan'ny vaccinium azy.
Fifantenana ny fomba fikarakarana tsara indrindra amin'ny fanangonam-bozaka (chokeberry) mainty ho an'ny ririnina
Ny voankazo amin'ny chokeberry dia afaka mijanona ela eo amin'ny hazo raha tsy mihinana azy ny vorona. Afaka ampiasaina vao haingana izy ireo, ary afaka manamboatra karazana banga ianao. Momba ny fomba hamokarana ny amboadia mainty ho an'ny ririnina, ny fitaovantsika manaraka. Ny fotoan'ny fanangonana ny volon'ireo chokeberry Nanomana ny sakafo matsiro ary nahafeno ny zavatra andrasana, mila mahafantatra ianao hoe rahoviana ny faka.
Ny fomba hanamboarana printsy: fambolena sy fiahiana
Ny printsy, ho toy ny kolontsa zaridaina, dia tsy mahazatra an'ireo mpamboly maoderina rehetra, satria amin'ny toe-java-mahazatra dia miha-akaiky kokoa ny tendany avaratra. Na izany aza, io tohotra io dia fantatra tamin'ny andron'ny Rosianina Fahiny, fony izy nampiasaina tamin'ny sakafo sy ny fanafody. Fomban'ny fambolena sy fisafidianana toerana. Fiantsenan'ny andriana: amin'ny lohataona - ny folo taona voalohany amin'ny volana Mey, amin'ny fahavaratra - ny folo taona faharoa amin'ny Septambra.
Ny fampiasana cloudberries: ny tombony sy ny fahasimbana amin'ny vatana
Cloudberry dia zavamaniry isan-taona hita any anaty ala sy ala matevina ao Rosia sy Belarosia, ary koa ao amin'ny tundra (faritra polarika-arktika). Ny voankazo mena sy malefaka, manana anarana mitovy amin'izany, dia tena mahasoa sy mahasalama. Ny akora simika avy amin'ny berry cloudberry Cloudberries dia manan-karena voalohany indrindra amin'ny vitamina sy fibre.
Ampiasao, ny toetra mahasoa sy ny fanoherana ny printsy
Tazom-baravarankely, ravina rakotra ary akorandriaka tsara tarehy avy amin'ny printsy dia fantatry ny mponin'ny Faritra Atsinanan'i Siberia, any avaratra atsinanan'i Eoropa sy Amerika. Ny olona dia ambany tsy hita isa, izay nifidy ireo ala maitso matevina sy faritra saro-bidy, antsoina hoe felam-boninkazo, karazam-borona mivolom-boaloboka, ary trondro. Amin'ny ankapobeny, ny printsy amin'ny famariparitana dia amin'ny fomba maro izay mampahatsiahy ny fihinanan-kena sy ny henry, fa ny singa iray amin'ny zavamaniry amin'ny fanasitranana azy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Berry-kolontsaina